फिनिसिङ मात्र बाँकी हुँदा यस्तो देखियो कलंकीको 'अण्डरपास वे' (फोटोफिचर), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
फिनिसिङ मात्र बाँकी हुँदा यस्तो देखियो कलंकीको 'अण्डरपास वे' (फोटोफिचर)
काठमाडौँ। कंलकीमा निर्माण भइरहेको नेपालको पहिलो ‘अण्डरपास वे’ निर्माण लगभग पूरा भएको छ। अबको केही महिनामै उक्त अण्डरपास वे संचालनमा ल्याइने बताइएको छ।
अहिले उक्त सडकको फिनिसिङको काम भइरहेको छ। कंलकीदेखि खसीबजार सम्मको निर्माण कार्य पूरा भइसकेको छ भने सितापाइला तिरको माटो निकाल्ने कार्य भइरहेको छ।
यस्तै सडकको छेउमा पैदलयात्रु हिड्ने मार्गमा प्लास्टर तथा टायल बिछ्याइदैछ। तर अबको केही महिनामै उक्त अण्डरपास वे संचालनमा आउने भएतापनि धुँवाधुलोका कारण त्यहाँबाट आवतजावत गर्ने यात्रुहरु भने निकै हैरान भएका छन्। उनीहरु दिनहुँ धुलाम्मे सडकबाट हिड्न बाध्य छन्। जसले गर्दा उनीहरको स्वास्थ्यमा समेत नराम्रो असर परिरहेको छ।